Diiwaan-gelinta iyo Bixinta Kaararka aqoonsiga Shaqaalaha Maaliyadda oo ka socota Boosaaso[Sawirro] – Wasaaradda Maaliyadda
Diiwaan-gelinta iyo Bixinta Kaararka aqoonsiga Shaqaalaha Maaliyadda oo ka socota Boosaaso[Sawirro]
November 5, 2019	in Warka
BOOSAASO – Madaxda Wasaaradda Maaliyadda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku hawal lanaa diiwaan-galinta iyo bixinta kaarka aqoonsiga shaqaalaha Wasaaradda Maaliyadda.
Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa safar shaqo oo ku aadan bixinta kaarka shaqaalaha ku tegay Agaasime kuxigeenka Maamulka Keenadiid Cali Jaamac.
Shaqaalaha Wasaaradda Maaliyadda ee gobolka Bari ayaa loo qaybiyay kaarka aqoonsiga oo ay ku lamaan yihiin qaadista faraha iyo Indhaha.
Agaasime ku xigeenka Maamulka Keenadiid Cali Jaamac oo la hadlay shaqaalaha ayaa kula dardaarmay in looga baahanyahay in ay sameeyaan dakhli uruurin xoogan ayna gutaan waajibaadka shaqo ee loo igmaday.
Dhinaca kale Keenadiid Cali Jaamac Agaasime kuxigeenka Maamulka ayaa kormeer shaqo ku tegay Kantaroolka Boosaaso waxana uu la kulmay madaxda iyo shaqaalaha Wasaaradda ee ka hawlgala halkaasi.
Kulan uu la qaatay shaqaalaha Wasaaradda Maaliyadda ayuu kula dardaarmay in il gaar ah lagu hayo hubinta badeecooyinka la canshuuraayo.
Agaasime Kuxigeenka Guud ee Maamulka W/Maaliyadda oo kormeer shaqo ku tagey Gaalkacyo[Sawirro]
Wasiirka Maaliyadda Dowladda Puntland oo kormeer shaqo ku tagey Bangiga iyo W/Maaliyadda ee Qardho[Sawirro]